Iran iyo Shiinaha oo gaadhay heshiis rubuc qarni soconaya
Home WARARKA Iran iyo Shiinaha oo gaadhay heshiis rubuc qarni soconaya
Berberanews-Wasiirrada arrimaha dibadda Shiinaha iyo Iran ayaa maanta oo Sabti ah kala saxiixday heshiis iskaashi oo 25 sano soconaya.
“Xidhiidhka ka dhaxeeyey labada dal wuxuu iisu beddelay heer iskashi istiraatiijiyad ku dhisan, Shiinahana wuxuu doonayaa inuu sii xoojiyo xidhiidhka uu la leeyahay dalka Iran,” ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi oo ay soo xigatay warbaahinta Iran inuu dhiggiisa Maxamed Javad Zariif uu sidaa ku yiri.
“Iraan iyada oo xor ah ayey go’aan uga gaareysaa xiriirka ay waddan kale la yeelaneyso, Iran ma aha sida dalalka qaar in mowqifkeeda hal wicitaan oo taleefan ah lagu beddelo” ayuu yidhi.
“Iskaashiga labada dal ayaa muhiimad weyn u leh hirgelinta heshiiska Niyuukilarka iyo fulinta waajibaadka saaran dalalka yurub”, ayuu ku yiri Rouhani qoraal boggiisa rasmiha ah la soo dhigay.
“Marka laga hadlayo tallaalka coronavirus, waxaa lagama maarmaan ah in la kordhiyo iskaashiga ka dhaxeeya labada dal, waxaanna dooneynaa inaan tallaal dheeri ah laga keeno Shiinaha.”
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isku dayay inuu dib u soo nooleeyo wadahadaladii Iran ee ku saabsanaa heshiiskii nukliyeerka ee uu ka tagay madaxweynihii hore Donald Trump sanadkii 2018, in kastoo talaabooyin dhaqaale oo adag ay weli taagan yihiin oo Tehran ay rabto in meesha laga saaro ka hor intaan wadahadalada dib loo bilaabin.
Maamulka cusub, Mareykanku waxay rabaan inay dib uga fiirsadaan siyaasaddooda oo ay dib ugu noqdaan heshiiskii nukliyeerka, Shiinuhuna wuxuu soo dhaweynayaa tallaabadooda, “ayuu yiri Wang “Waxaan siin doonaa Iran talaalada coronavirus badan Iranna waa mudnaanta aan siinayno talaalada.”
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibedda Iran, Saciid Khatibzadeh wuxuu sheegay in heshiisku uu ahaa “khariidad” iskaashiga ganacsiga, dhaqaalaha iyo gaadiidka, iyadoo “si gaar ah diiradda loo saaray arrimaha gaarka ah ee ay labada dal daneynayaan.
Shiinaha oo ah dal xidhiidhka ganacsi ee ugu badan la leh Iran, isla markaana ah saaxibo soo jireen ah, ayaa isku raacay sanadkii 2016 in la kordhiyo ganacsiga labada dhinac in ka badan 10 jeer lana gaarsiiyo $ 600 bilyan muddo toban sano ah.
Wasaaradda ganacsiga ayaa Khamiistii sheegtay in Beijing ay isku dayi doonto inay ilaaliso heshiiskii nukliyeerka Iran ee 2015-kii ayna difaacdo danaha sharciga ah ee xiriirka Shiinaha iyo Iran.
Mareykanka iyo quwadaha kale ee reer galbeedka ee heshiiska nukliyeerka la galay Tehran waxay isku khilaafsan yihiin kooxda ay tahay inay marka hore ku laabato heshiiska, kaasoo uu ka tagey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump sanadkii 2018.
Previous article“140 qof ayaa bishan lagu aasay xabaalaha Burco” Maayar Muraad
Next articleItoobiya, Masar iyo Suudaan oo qarka u saaran inuu dagaal ka dhex qarxo